फाल्गुण १८, २०७५ | रसुवा
नेपालभित्र हुने उत्पादन वस्तुलाई प्राथमिकता दिनको सट्टा विदेशबाट आयात गरेर खाइरहेको छन् । पछिल्लो ६ महिनामा रसुवागढी नाकाबाट डेढ अर्बको स्याउ नेपाल भित्रिएको छ । नेपालको हिमाली जिल्लाहरुमा स्याउ खेती भएतापनि नेपाली उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको लागि सरकारले चासो दिएको छैन ।
रसुवागढी भन्सार कार्यालयका अनुसार यो नाका हुदै २ करोड २९ लाख ४९ हजार ९ सय ४१ किलो स्याउ आयात गरिएको छ । जसको मुल्य १ अर्व ५१ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैया रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ करोड ३६ लाख ९० हजार ८ सय ८ सय ४५ किलो स्याउ आयात भएको थियो ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्का अनुसार यो आर्थिक वर्षको छ महिना र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा दोब्बर आयात भएको हो । आ.व. ०७४÷०७५ मा ५ करोड ८५ लाख ८४ हजार ३ सय ६९ किलो स्याउ आयात भएको भन्सार कार्यालय रसुवामा तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका स्याउले बजार नपाएको समाचार पनि नौलो होइन । नेपालका उत्पादनमा जोड नपुगेको अवस्थामा रसुवागढी नाकाबाट मात्रै अर्बाैको स्याउ आयात गरेर अवाश्यकता पुरा गरिरहेका छन् ।
नेपालमा चीन, भारत, इटाली थाइल्याण्ड र यूएसबाट स्याउ आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै स्याउ चीनबाट आयात हुने गरेको छ । अ.ब. २०७४÷०७५ मा मात्र ७९ हजार ८ सय ७६ टन स्याउ आयात भएको छ ।
भारतबाट १३ हजार ४ सय १३ टन स्याउ आयात भएको छ । स्याउ आयातमा मात्रै वार्षिक ५ अर्व ६२ करोड ९२ लाख ९५ हजार बाहिरिने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
चीनबाट ४ अर्व ६६ करोड ७७ लाख २५ हजार मुल्य बराबरको स्याउ आयात भएको छ । स्याउ मुख्यतः काठमाण्डा,ै पोखरा, चितवन लगायतका सहरमा खपत हुने गरेको व्यापारी पुरुषोतम पौडेलले बताए ।
रसुवागढी नाकाबाट कृषिजन्य वस्तु आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम रहेको छ । उक्त नाकाबाट आयात भएका कृषिजन्य वस्तुहरुमा स्याउ, नासपती, बकुल्ला भोटे चिया, चम्पा पिठो खुुर्सानीको धुलो, बदाम, च्याउ, गुन्द्रुक सुकेको आरु बखडा, बोडी कफि तरकारीका विउहरु, ओखर, दाल चीनी सुकेको बयर, लसुन, किसमिस, अदुवा, जिरा, जिम्बु, चामल, टिमुर लगाएतका छन ।
निर्यात भएका वस्तुहरुमा बेसार, खुर्सानी, मैदा, चिया, च्याउ, कफि, मसला, दाल र मुस्ताङमा स्याउ आत्म निर्भर कार्यक्रम लागु गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तगरगत पनि स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्र वा जिल्लामा स्याउ जाने तथा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।